Xiriirka Kubada Cagta yurub oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada Fifa – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Xiriirka Kubada Cagta yurub oo dalbaday in dib loo dhigo doorashada Fifa
UEFA ayaa ku baaqay in doorashada madaxtinimada Xiriirka kubada Cagta aduunka ee FIFA oo la filayo in ay dhacdo jimcaha biriya dib loo dhigo kadib fadeexadii musuq-maasuq ee hareysay Maamulayaasha Kubada cagta caalamka .
Toddoba saraakiil oo ka tirsan FiFa ayaa lagu qabtay Zurich aroortii hore Arbacadii kuwaas oo ay la baxeyn Ciiddanka Khaaska ee dalka Switzerland waxaana wax laga weydiinaya lacago farabadan ee la musuq maasuqay .
taas oo qeyb ka ah lacago laga helay qoondaynta koobka aduunka ee sanadka 2018 lagu qaban doono wadankaRussia iyo kan 2022 ka dhici doono wadanka Qatar.
Madaxweynaha haatan talada haaya ee Sepp Blatter ayaa tartan adag kala kulmaya boqor Prince Ali Bin al-Hussein oo fursad siin karta fadeexada musuqa ee lagu soo ogay Fifa .
FIFA ayaa xaqiijiyay in Maalinta jimcaha ay dhici doonto doorashada madaxweynaha kubada cagta dunida laakiin hadda UEFA ayaa isha ku heysa inay joojiso dacwadda ay sabab u tahay muranadii ugu dambeeyay.
“Xubnaha Guddiga Fulinta UEFA waxaa lagu qanciyay in ay jirto baahi weyn oo isbedel ah in hogaanka sare ee FIFA Congress FIFA waa in dib loo dhigo lixda bilood ee soo socda gudahood, “ayaa qoraal rasmi ah ee ka soo baxay UEfa lagu yiri .
Arintan ayaa imaneysa xili FiFa ay wali ku adkeysaneyso in ay dhacdo Doorashada maalinta jimcada ah sida uu shalay saxaafada u sheegay afhayeenka Xiriirka kubada cagta Aduunka .
Xog: Magacyada 11- Shaqsi ee Fadeexada FiFa ku lug leh + SAWIRRO
Deg Deg; Sheekh Xasan Turki oo Xalay Ku Geeriyooday Gobolka Jubadda Dhexe